सन्दर्भः नारी दिवस - SangaloKhabar
- मनिषा पोखरेल
मनिषा पोखरेल, धनकुटा नगरपालिका–४
आज त पुरै बिदा छ क्यालेन्डरमा पहिले नारी दिवसमा महिलालाई मात्र विदा भनेर हुन्थ्यो । यसबाट स्पष्ट छ कि महिलालाई दिएको बिदा मात्र काफी छैन । दुबै महिला र पुरुषलाई नै चाहिएको छ । पुरुष जीवनका अधिकाश अनुभूति नारीले गर्न सक्छे तर नारीको अत्यन्त गहिरो र बेग्लै अनुभूति प्ररुषले गर्न सक्दैन । आज नारी दिवस मनाइरहदा कैयों महिलाहरू घरको काम धन्दा, घाँस, दाउरा सकेर दिवसमा सहभागी हुन आतुर होलान् । बजार शहरतिर आरक्षणका कुरा, महिलाको हक अधिकारको सहभागीताको कुरा, हत्या हिंसालाई उजागर गर्ने कुरा कति हो कति उता रेडियो, सञ्चार माध्यमबाट न्याय नपाउने महिलाको कुरा हुँदै छ ।
कैयौं नारी महिलाहरुलाई न्याय दिलाउन बसेका महिलाको हकहितमा लागि परेका आमा, दिदी, बहिनीहरु महिला अधिकारकर्मीलाई पनि गाह्रो छ । दिनभरि सवाल मुद्दाको विषयमा वकालत गरेर हिड्दा पनि घर पुग्दा सकस उहाँलाई नै छ । घर परिवार पुरैको जिम्मेवारी लिएर हिड्नुपर्यो । कम गाह्रो छ त्यो सबै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न, तपाई पुरुष सक्नुहुन्छ ? दिनभरी काममा जादा पनि घरको फित्री बिना हिड्न गाह्रो हुन्छ सगसँगै गएका पुरुष मित्र निस्फिक्री हिडेका हुन्छन् । हिड्दा पनि सुरक्षित छुँ, छुइन बुझेर हिड्नु पर्ने, घरको समाजको डर बोक्ने पर्ने, निस्फिक्री, स्वतन्त्र, निडर भएर हिड्ने दिन कहिले आउला ? आखिर कहिले सम्म…?
रजस्वला, गर्भाधारण प्रसुती प्राकृतिक पीडादायी क्षणको सामना नारीले गर्नुपर्छ । तर पनि समाजमा कलकिंत हुने डरले आफ्नो अस्मिता आफै जोगाउन नारी नै चनाखो हुनुपर्ने….
छोरी घर नआउन्जेल हुने डर त्यो आमा बुबालाई कहिलेसम्म ? महिलालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने पुरुषहरू पछाडि कुरा गरेर, घर व्यवहार समाल्नु नि किन हिड्नु पर्ने भनिराखेका हुन्छन् । महिला देख्ने वित्तिकै उनीहरूको मानसिकतामा के आउछ खै…
महिला प्राकृतिक रूपमा कमजोर हुन्छे… हो शारीरिक रूपमा पुरुषभन्दा कमजोर त प्रकृतिले नै बनाइदिएको छ तर मानसिकता त पुरुषको कमजोरीले हने । समाजले कमजोर बनाइदिएको हो ।
समाजमा हुँने विभेदको अन्त्य महिला र पुरुषको विभेदको कारण मात्र नभई महिलाले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक विचार ल्याउन सक्नुपर्छ । ‘पुरुष’ र ‘स्त्री’ हुनुको सीमारेखाको संकुचित पर्खाल नै तोड्नपर्छ । महिलालाई निडर, निस्फिक्री भएर हिड्ने बाटो समाज, अभिभावक, दाजु–भाई, बुवा र घर परिवारबाट नै हुनु पर्छ । कहिल्यै पनि आमा तिमी गल्यौं, थाक्यौं, खायौं भनेर सोध्ने गरिदैन । पुरुषले काम गरेर आउछ आर्थिक रूपमा ऊ बलियो हुन्छ र हक अधिकार उसको हातमा निर्धारण हुन्छ । (श्रीमती) महिला दिनभरी पुरुषकै बराबरी काम गरेर आए पनि उ थाक्न पाउँदिनन् । जिम्मेवारीले उसलाई गिजोलेको छ ।
आधा–आधा काम गरेर बस्ने ईच्छा उनमा नि त होला । श्रीमान मोवाईलमा व्यस्त, श्रीमती घरकै काममा, केटाकेटी सबै जिम्मेवारी उसैमा छ । उसकै भरमा परिवार चल्छ । महिला एक असल डाक्टर, आमा, गुरुआमा सबै हुन् । अब भन्नुस् त महिला बढी शक्तिशाली हुन्छ की पुरुष ? यसको उत्तर तपाईमा नै छ ।
नारीलाई शक्तिशाली भगवानले नै बनाएका हुन् । नारी विना पुरुषको अस्तित्वको पूर्णता हुन सक्दैन । दुबै जना नारी पुरुष जन्मेको एउटै आकाश र धर्ती एउटै भए पनि पुरुष पुरुष शब्द बलियो र महिला शब्द शब्दमा नै कमजोर लाग्ने गरी समाजले परापूर्व कालदेखि नै चयन गर्दै आएको छ ।
गीतामा भनिएको छ “जब–जब संसार परिवर्तन चाहन्छ तब परिवर्तन हुनुपर्छ । ” वास्तवमै श्री कृष्ण भगवानले भने जस्तै समाजले परिवर्तन मागेको छ । श्रीमान मर्दा सँगै सती जाने हाम्रो देशमा त्यो प्रथा हटेको छ । महिनावारी हुँदा छुन नहुने हाम्रो समाज बिस्तारै परिवर्तन हुँदै छ । जातीयताका सवालहरुमा परिवर्तन भएको छ । समाजले परिवर्तन चाहे अनुसार क्रमिक परिवर्तन हुँदै जान्छ । छोरा, छोरीको चाडो बिहे गर्ने,समाज अहिले ३०–३२ बर्षको उमेरसम्म पढाइ सकेर जागीर खाएर मात्र उनको रोजाइको पुरुषसँग बिहे गर्ने शैलीको बृद्धि भएको छ ।
अहिलेको आधुनिक समाजमा महिलाहरु पढाई, खेलकुद, सरकारी सेवा, राजनिती जस्ता हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढेका छन् । तर समाजको भने त्यत हगाडि बढ्न सकेको छैन । महिलालाइृ धेरै जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसको एक अंश मात्रै कम गर्दिने हो भने उसले धेरै हौसला र हिम्मतका साथ काम गर्न सक्छे । अवसर, आँट, हौसला दिएर हेर्नुहोस् पुरुषले गर्न सक्ने काम महिलाले पनि गर्छिन् ।
महिला राष्ट्रपति भएको हाम्रो देश उदाहरणीय मात्र स्वयंम् उहाँ हुनुहुन्छ । त्यसैले महिला किन कम छौं ? के मा कम छौं ? त्यस्तो घर जुन महिलाबिनाको नि हुन्छ त्यो घरको स्थिति बुझ्नुहोस् त कस्तो हुन्छ ?
“जननी जन्मभूमिस्च स्वर्गदपि गरियसी” जन्म दिने आमा र मातृभूमि स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भनिन्छ । नारी भनेको मेरो बुझाईमा आमा हो, धर्ती माता हो, हामीलाई जन्मदिने, कर्मदिने आमा हो, आमाबिनाको घर छोरीबिनाको घर भनेको मायाबिनाको घर जास्तो हुन्छ । महिलाले गर्ने कामहरु पुरुषले गर्ने कामको तुलनामा उत्कृष्ट, सफल, छलकपट बिनाको हुन्छ भनिन्छ ।
पितृसत्तात्मक हाम्रो समाजले विभिन्न कार्यक्रममा होस् वा राम्रो पदमा अध्यक्षता वा प्रमुख अतिथिको रुपमा पुरुष राख्ने गर्छन् । मुख्य पद जति पुरुषको र सहायक बैकल्पिक पदमा महिला राख्ने गरिन्छ । महिलाको काम भनेको फूल, माला लगाइदिने, स्वागत गर्ने, चिया खाजा वितरण यस्तै यस्तै….
कहिले काही त लाग्छ नि महिला अध्यक्ष होस् वा प्रमुख पद जति महिला भएर पुरुषले यसो गर्दा कसो होला ? कहिले काही साटिएर काम गर्दा पुरुषले महिलाको कामको सम्मान गर्ने थिए की ?
पुरुषले पुरुषार्थको स्वतन्त्रता जन्मसिद्ध लिएर आउँछ तर महिलाको स्वतन्त्रता समाजको संस्कारले निर्धारण गरिन्छ । जन्मदै खुसीको हर्ष बढाई हुँदैन किनकी तिमी ‘स्त्री’ महिला र पुरुष भएकै कारणले हो । वास्तवमा दुबै जना नारी पुरुष जन्मेको एउटै आकाश र धर्ती भएपनि पुरुष शब्द बलियो लाग्ने समाजले बर्षौदेखि महिला शब्दनै कमजोर चयन गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको शुभकामना ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २४, २०७८ समय: ८:२९:३३